Ukusebenza kanye Nezici Zokwenza Isikhwama Sokukhiqiza - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ukusebenza Nezici Zokwenziwa Kwembongolo
Ukusebenza kanye nezici zokuthwala izimpande
Ukwenziwa kwe-spindle kusetshenziswa njengendlela ekhethekile yokuphenya, futhi isakhiwo saso sikhethekile. Yamukela ikholomu yangaphakathi yodwa ikholomu encane ye-cylindrical roller isakhiwo, ukucaca okusheshayo kwejubane eliphethe umthamo we-radial omsulwa. Ukukhiqiza jikelele emva komhlangano kusevulekile, ucabangela isidingo sokuhlangana, ukupakisha, ukuthutha nokuvuselela abasebenzisi. Ukukhiqiza okwenziwe nge-spindle okwamanje kusetshenziselwa uhlobo oluthile lwe-anti-rust oil. Akukona nje ukusebenza okuhle kokulwa nokugqwala, kodwa futhi kuqinisekisa ukuthi ukukhiqiza akulula ukuhlukaniswa uma ufaka umhlangano wokugcina womsebenzisi. Ngenxa ye-roller centripetal cylindrical roller, uchungechunge olwenziwe luqinile futhi luthwala umthamo omkhulu we-radial. Ukucaca okuphezulu, ukujikeleza okuguquguqukayo nokuzinzile, umsindo ophansi kanye nejubane eliphezulu. Isakhiwo esilula kanye nokusetshenziswa kwamandla aphansi; Ukondliwa kulula kakhulu.
Njengamanje, izinga lokukhishwa kwemikhiqizo yezinhlayiya ezibekwe eceleni likhona: I-FZ / T92025-1994 & quot; i-DZ series spindle bearing & quot; imboni yezindwangu zendwangu. Uhlobo olusha lwezinto ze-nylon eziqinisiwe zinemikhakha elandelayo: okokuqala, isetshenziswe kuma-plastic plastics - i-PA66 ingilazi ye-glass fiber eyakhiwe yensimbi yensimbi. Okwesibili ukulandela indlela yokufakelwa kwejoza, ukugcinwa kweshelufu kungcono, ubukhulu nokuzinza kwesimo; Okwesithathu ukusetshenziswa kwezinto ze-nylon ukugcina umsebenzi othize wokugcoba; Okwesine ukuthuthukisa ukwakhiwa kwesakhiwo somgodi, okunganciphisa ukuphakama kwe-swing of the roller ekusebenzeni okusheshayo, ngaleyo ndlela kunciphise umsindo ngezinga elithile.
Ukusetshenziswa okufaneleko kokuthwala okwenziwe nge-spindle
Okokuqala, ukuletha umhlangano wesigodi sembobo, ukuma kanye nokuchithwa, ukuthela kuzothinteka yithonya layo, ngeke ukwazi ukudlala ukusebenza okuhle kakhulu. Isibonelo, uma ukulinganisa ubukhulu bomgodi nokucacisa ukuma akulungile ngokwanele ukuba kubangele ukukhishwa kwendandatho yangaphandle, umgodi wangaphakathi wokuthwala wehla. Uma ukunemba kwehlombe kungalungile, ukufakwa kwendandatho yangaphandle kanye ne-roller tilt kuyokwakhiwa, futhi umthwalo ogxilisiwe uzokwanda, ukuze impilo yokukhathala yokuthwala iyancipha, okuzoholela ekuhlulekeni kokuthwala futhi ukususa. Uma ukulinganisa okungaphakathi kwesikhala sokugaya okubhekene nokugcina okungalungile, okufana nobukhulu, ukuzungeza, ukugubha, ukuvama nokugqwala, indawo, izinga lokunemba, kungabuye kuholele ekuphelele kwe-spindle value vibration value ukwandisa kakhulu.
Okwesibili, iqoqo eliphelele lezintambo likhethwe ngokucophelela ngaphambi komhlangano, ngakho izingxenye zezintambo aziguquguquki ngaphambi kokuba zisetshenziswe.
Okwesithathu, ukuhlanzwa kwe-spindle bearing and spindle. Ngenxa yokwakhiwa kwezinyawo ezinhlangothini nezinye izingxenye eziningi ku-spindle, ukuhlanzeka kwe-spindle nakho kungathinta ukuhlanzeka kwendawo yokusebenza. Ngakho-ke, kuyindlela enengqondo yomhlangano okufanele isetshenziselwe ukuhlanza ngaphambi kokuhlanza izingxenye ze-spindle nomhlangano womhlangano.
Okwesine, ukubhekwa akufanele kuthinteke ukuqhuma kanye nokushaqeka ngesikhathi somhlangano, futhi ukushayisana kanye nomthelela wokuthwala kungabangela kalula ukushayisana phakathi kwezinxenye ezithwalayo, okwenza kube nokwehluleka kokuthwala.
Okwesishiyagalolunye, uma umqulu wokuthwala usuqenqemeni, kufanele uqaphele ukulawula i-Angle kanye namandla we-roll, ukuze ugweme ukuphazamiseka kokuthwala ingxenye ngenxa yokukhanda okungalungile.
Okwesithupha, ngokubheja okuvele kudlule ukugqwala noma isikhathi eside sokugcina, bangase bathuthukise ukugqwala noma banamathele ekufeni ngenxa yokomiswa kwamafutha okulwa nokugqwala.
Ukugcinwa okulungile nokugcinwa kwezibhebhe
Okokuqala, ukugxila okwenziwe ku-spindle kufanele kusetshenziswe ngokugcwele ngesikhathi sokusebenza, futhi amafutha kufanele agcwaliswe ngezikhathi ngezikhathi ngokoqobo. Ngakho-ke, kumabhizinisi omsebenzisi, kufanele ukhethe amafutha ahamba phambili angcono, afaneleka kakhulu. Uhlobo olusha lwamafutha e-spindle akhethekile lungase luthuthukise ukusebenza kwe-lubricating, lwandise umjikelezo we-oyela, ukwandise ukuphila kwe-spindle kanye nokuthwala, futhi ube nemikhiqizo ye-antirust ne-anti-corrosion engcono.
Okwesibili, ukusebenzisa ukushisa kwe-yiloni, okusetshenziselwa ukushisa kumele kube ngaphansi kuka-120 â "ƒ, kuvunyelwe ukuba upheke amafutha ukuze uhlanze. Ngaphezu kwalokho, i-spindle kufanele ilalele indlela yokuvimbela umonakalo kanye nokuqhafaza phezulu. Ukuze ususe isisele se-site yokuthwala, kungcono ukugeza nokupompa amafutha ngaphansi kwe-spindle. Kubalulekile ukugwema ukusetshenziswa kokulahlwa kanye nokuqoqwa kwedoti endaweni yokuthela, okwenza ukuthi ukukhiqiza kuvezwe umsindo, ukugqoka ukuhluleka nokunye okunye.
I-Deep Groove Ball Bearings Yokufaka Inqubo Yokucacisa
Ama-Deep Groove Ball Bearings Afaka Isici